धर्म Archives - Lokpati.com
Tag - धर्म
विश्वका धर्म : कुन धर्मकाे ईतिहास कस्ताे छ ?
काठमाडौं। प्राचीन कालमा हजारौं धर्महरु प्रचलनमा थिए। त्यतिबेला धर्म नै राज्य सञ्चालनको मूल आधार हुन्थ्यो।
न्याय निसाफको लागि धर्मकै सहारा लिने गरिन्थ्यो।
मान्छेहरुमा धर्मको त्रास थियो। जसले गर्दा उनीहरु धर्मको डरले पनि...
धार्मिक राजनीति कति घातक, कति विनासकारी ? (बहस)
नेपाल अहिले यस्तो मोडतिर धकिलिँदै गरेको प्रतीत हुन्छ, जहाँ हिन्दू, इसाई, मुस्लिम, बुद्ध वा धर्मान्तरणको नाममा आम असन्तुष्टि भड्कन सक्छ। हाम्रा छिमेकमा भइरहेजस्तो धर्म विद्रोह वा द्वन्द नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्नँ।...
‘काँग्रेस धर्मको राजनीति गर्दैन, आदर्शको राजनीति गर्छ’
काठमाडौँ, १५ पुस । नेपाली काँग्रेसले राजनीतिलाई धर्मसँग मिलाउन नचाहेको स्पष्ट गरेको छ । पार्टीको कार्यसूची धर्म नभएको र धर्म बोकेर राजनीति नगर्ने पार्टीको भनाइ छ ।
महासमिति बैठकपछि पार्टीले विभिन्न समूहसँग गरिरहेको...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवनले मंगलबार आयोजना...
मलाई देवताले केही अनुकम्पा गर्लान् भन्ने त्यस्तो केही लाग्दैन। म देख्छु– कति साना बच्चाहरू मरिरहेका छन्, आमाहरूले कति कल्पेर देवताहरूको प्रार्थना गरे होलान्, कतिका दुलाहा मरिरहेका होलान्, घर बर्बाद कतिको भयो होला। ती सबै...